September 23, 2013 BASHIR HASHI YUSSUF Leave a comment Aside
→ Degdeg: Ciidamada Kenya oo sheegtay inay la wareegeen guud ahaan dhismaha Westgate.	Warar goor dhow ka soo baxay militeriga Kenya ayaa sheegaya in ay gacanta ku dhigeen guud ahaan suuqa Westgate ee mudada sadexda beri ah lagu dagaalamayey. Warkan oo goor dhow soo baxay ayaaney jirin cid ilaa haatan xaqiijin karta sheegashada Kenya maadaama aan illaa haatan loo ogolaan wariyayaasha inay gudaha u galaan goobtii dagaalka qaraari maalmahan ka dhacayey. Waxaa haatan la arkayaa gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaaska loo yaqaano oo halkaa ka soo baxaya, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in weli rasaas goos goos ah halkaa laga maqlayo isla markaana qiiq madoow uu cirka isku shareeray.
← Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku hoolan tahay Helitaanka Hub Kiimiko ah iyo Xog ku aadan arintaasi oo shaaca laga qaaday	Sida lagu sheegay war uu baahiyay Tv,ga CBS ee ku yaala dalka Maraykanka Sadex dhalinyaro Soomaali ah oo dacwad laxariirta inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al Qacida qeybta ka dagalanta wadanka Yemen ayaa sheegay xog ku saabsan in Xarakadda Al-Shabab ay maagantahay inay samaysato hub ay ku jiraan walxo kiimikaal ah. Dhalinyaradaan oo ay maxkamadayntooda ka socoto magaalada New York ayaa sheegay in waaxda barista iyo hormarinta Al-Shabab ay wadaan qorshe ku saabsan sidii ay Shababku ku heli lahaayeen ama ay ku sameysan lahaayeen hub ay ku jiraan walxo kiimikaal ah. Warkaan waxaa lagu sheegay in saraakiil ka tirsan Al-Qacida ay dalka Yemen ka qaadeen qeyb ka mid ah walxaha kiimikaalka ah isla markaana ay geeyeen qeybo ka mid ah gudaha Soomaaliya oo ay Shababku maamuulaan. Si cad looma sheegin halka uu Soomaaliya ka yaalo walxaas kiimikaalka ah hase ahaatee Tv,ga oo soo xiganaya Sadeexdaan dhalinyarada ah ayaa ku waramaya in Al-Shababku ay wadaan qorshe ay ku baadi goobayaan hubkaas.